WARBIXIN: Maxaa ka run ah Hanjabaadaha Hogaamiyaasha Puntland & Somaliland ay Saxaafadda isku marinayaan, Dagaalse ma jiraa? – Puntlandtimes
WARBIXIN: Maxaa ka run ah Hanjabaadaha Hogaamiyaasha Puntland & Somaliland ay Saxaafadda isku marinayaan, Dagaalse ma jiraa?
August 21, 2018 W LAASCAANO
Hoggaamiyaasha waqtigan hogaamiya Puntland & Somaliland, waxay markale soo celiyeen Hanjabaado ay isku marinayaan saxaafadda Soomaaliyeed, xili ay maleeshiyadoodu isku jiraan masaafo yar oo ay ku dagaalami karaan wax yar oo fudud, waxayna isku hayaan gacan ku heynta gobalka Sool.
Puntland & Somaliland waxay xiisadooda isku heynta markale sare u kacday todobaadkan dhamaanaya, markii ay Puntland si cad u sheegtay in ay dagaal ku qaadays ciidamada Somaliland oo kusugan deegaanka Tukaraq ayna qabsadeen horaantii sannadkan 2018.
Hanjabaada ayaa korortay Somaliland, waxay sheegtay in ay diyaar u tahay dagaal lagu soo qaado oo ay ka jawaabi doonto, Xildhibaano iyo Madaxweynaha Somaliland labaduba waxay cadeeyeen in ay dagaalamayaan.
Sidda muuqata Hanjabaadaha labada dhinacba waxay hadda u muuqdaan bar iclaameed dagaal oo dhici kara maalmaha nagu soo wajahan, taas oo aan cidna ka qarsooneyn, xili ay labada dhinacba mushkilado waa weyn ku furan yihiin.
Puntland waxaa kusoo fool leh doorashada oo xiisaheedu aad u sareeyo, dhinacyo ay ka mid yihiin Musharaxiintu ma jecla dagaal iyo rabshad waqtigan uu galo maamulka waqtigu ka dhamaanayo ee uu hogaaminayo Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Madaxweyne Gaas iyo Xukuumaddiisa waxaa lagu eedeynayaa in ay ku guuldareysteen ka dhabeynta in ay soo celiyaan deegaanada maqan, xiligana ay ugu beegayaan dagaal la qaado xaaladda doorashada oo ay dib u dhigayaan ama ugu yaraan hoos u dhigayaan heerka loolanka loogu jiro.
Mid kamid ah siyaasiinta la socda xaaladda gobalka ayaa u sheegay Puntlandtimes.com, in dagaal kasta oo dhexmara Puntland iyo Somaliland, aysan baaqan doonin doorashada Madaxtinimada ee kadhacaysa Garoowe, balse wuxuu qiray in uu dhici karro dibu dhac ku wajahan loolanka siyaasadeed.
‘’Gaas kuma dhaco in uu dib ama ugu yaraan hoos u dhigo hanaanka doorashada, balse caqabada kaliya ee ay Xukuumaddiisu sameyn karto waa saameynta xagga baarlamaanka oo ay ku mashquulinayso dadka dagaalka Tukaraq, ayna kaga faa’iideysan karto faragalin ay ku sameyso Xildhibaanada soo baxaya’’ Ayuu yiri Siyaasigan.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi dagaal xiligan kaga bilowda Tukaraq, wuxuu ku weynayaa fursado muhiim ah, gaar ahaana cadaawad iyo dagaal ku bilowdaa uu dhaxalsiin karaa burbur, dhaqaale, Milateri iyo siyaasadiisa aan fadhiyin oo hoos u dhacda.
Falanqeeye Yuusuf Axmed Caar oo kusugan Hargeysa ayaa sheegaya in aysan u fududeyn wax kasta sidda ay la tahay labada Hogaamiye ee maamulada Puntland & Somaliland, si gaar ahna Madaxweyne Biixi waxaa horyaala caqabad adag oo dhanka Ammaanka iyo siyaasadda kaga furan.
Jabhada Col, Caare waa arrin kale oo boog weyn ku ah jiritaanka Maamulka Muuse Biixi, waxaana dagaal ay ka bilowdaa gobalka Sanaag uu naafeyn doona is heysiga ciidamada maamulkaas oo mudo dheer la diyaarinayey, laakiin hadda saameyn ay ku reebtay doorashadii ka dhacday deegaanada November 2017.
Shacabka Gobalka Sool ee lagu dul-dagaalamayaa waxay tani u tahay arrin aysan welwelkeeda joogi Karin, waxaana barakacay in ka badan 110,000 Kun oo qof, kuwaas oo hadda ka hayaamay guryihii ay ku lahaayeen deegaano badan oo kuyaala gobalkaas, waxayna hadda dhaxanta iyo qoraxdu ku haysaa deegaano aan aheyn meelihii ay daganayeen.